"အမဲလိုက်ထွက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?(၁)" - Matupi Times Olthang
ခငြျးတောငျဓလေ့အခွအေနအေရအမဲလိုကျခွငျးအတတျပညာဟာအမြိုးသားတိုငျး(လူကွီးလူငယျ)တတျအပျတဲ့ပညာတခုဖွဈပါတယျ။အမဲလိုကျခွငျးမှာယဘေုယအြားဖွင့ျ၂မြိုးတှေ့ရတယျ။၁)တဦးခငြျးအမဲလိုကျ(အမဲပဈ)ခွငျး၂)အုပျစုလိုကျ(အဖှဲ့အစညျးနဲ့)အမဲလိုကျခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။ အမဲလျုကျရာသီရောကျရငျအမဲလိုကျထှကျဖို့အမြိုးသား တိုငျးစိတျအားထကျသနျကွပါတယျ။
အထူးသဖွင့ျလူပြိုပေါကျစလူရှယျလေးတှဆေိုရငျအမဲလိုကျမှာပါဝငျဖို့ကိုယျရညျသှေးရပါတယျ။အမဲလိုကျခွငျးဖွင့ျမိမိအရညျအသှေးကိုပွသရသလို မိမိကိုယျကိုယုံ ကွညျမှုလဲပိုတကျစပေါတယျ။ အမဲလိုကျရာသီမရောကျမီ ပွငျဆငျစရာတ ှကေိုလဲကွိုတငျပွငျဆငျရပါတယျ။၁)အမဲလိုကျခြိနျမှာအဓိကလိုအပျတဲ့ယမျးအလုံအလောကျရှိထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
ပှင့ျလငျးရာသီစတာနဲ့ယမျးစိမျး၊ယမျးကိုရဖို့ပွငျဆငျရတယျ။ယမျးတှဖေို၊ယမျးတှရေဖို့ယမးပငျတှခေုတျပွီးယမျးမီးသှေးလုပျ၊ယမျးမှုန့ျတှရေအောငျထောငျးရတယျ။ယမျးကောငျးရဖို့လုပျနညျးအဆင့ျဆင့ျလုပျဆောငျရပါတယျ။ လူကွီးတှကေ လညျးလုပျဆောငျနညျးအဆင့ျကိုလူငယျလူရှယျတှဆေီ တဆင့ျမြှဝသေ ငျပွပေးကွတယျ။ဒါကွောငျလူရှယျတှလေဲယမျးလုပျနညျးကိုတတျထားရပွီးအမဲလိုကျရာသီအမှီကွိုတငျပွငျဆငျထားရတယျ။
၃)အမဲလိုကျဖို့တာဝနျပေး၊တာဝနျခှဲဝခွေငျးအမဲလိုကျရမဲ့ဒသေနရောအလိုကျ အမဲလိုကျမောငျးသူမြား၊အမဲပဈသူမြားကိုတာဝနျအသီးသီးခှဲဝပေေးကွတယျ။ကြှမျးကငြျမှုရှိပွီးအမဲလိုကျဦးဆောငျသူမှတာဝနျခှဲဝပေေးမှုကိုအလေးထားပွီးမိမိတာဝနျကြအေောငျအတတျနိုငျဆုံးလုပျဆောငျရပါတယျ။လူငယျလူရှယျမြားအနနေဲ့မြားသော အားဖွင့ျအမဲမောငျးသူမြားအဖွဈတာဝနျပေးကွတာမြားပွီးအမဲပဈသူမြားရဲ့ကြှမျးကငြျမှုနဲ့အတှေ့အကွုံ၊အမဲပဈခွငျးမှာအောငျမွငျမှုအလိုကျအမဲကောငျထှကျလာနိုငျတဲ့နရောမှာပထမဦးစားပေး၊ဒုတိယဦးစားပေးအစရှိသညျဖွင့ျသတျမှာနရောပေးကွတယျ။
အထူးပွောစရာရှိတာကအမဲရရှိဖို့ကအဓိကဖွဈတဲ့အတှကျဦးဆောငျသူရဲ့တာဝနျခှဲဝမှေုကိုတာဝနျကြကွေရတယျ။(အမဲလိုကျထှကျဖို့အဆငျသင့ျဖွဈပွီလား?(၂)ဆကျရေးခငြျသူမြားဆကျလကျရေးနိုငျပါတယျ)မှတျခကြျ။ Salai Salai Royal ရဲ့”အမဲလိုကျရာသီရောကျပွီ “post ကိုအမှီပွုထပျရေးခွငျးဖွဈပါတယျ။credit;Salia Ha Lwin
“MATUPI AH MATU CAA MEYET LAE A CANG U EH?” (68,048)
Donald Trump neh Kim Jong-Un Historical Summit ah senathuh rhoi (49,199)
Italian Industrial ung (36,277)
North-Korea loh America neh Thikat la Caboi vel hmaih ham abih (19,898)